Apple Music for Android waxay ku dari doontaa taageerada Chromecast | Wararka IPhone
Apple Music for Android waxay ku dari doontaa taageerada Chromecast
Apple waxay soo saartay codsi Apple Music ah oo loogu talagalay Android bishii Sebtember 2015, ku dhowaad saddex bilood ka dib markii rasmiga rasmiga ah ee rasmiga ah ee suuqa, halkaas oo ay timid bishii Juun ee isla sanadkaas. Tan iyo hada, ragga ka socda Cupertino waxay si joogto ah u cusbooneysiinayeen barnaamijka Android ku darista mid kasta oo ka mid ah astaamaha cusub ee laga heli karo macruufka.
Haddii aad tahay isticmaale Apple Music macruufka ah laakiin sidoo kale lagugu qasbay, arrimo shaqo awgood, inaad isticmaasho Android ama qof kale oo qoyskaaga ka tirsan oo aad la wadaagto rukunkaaga ayaa sidaas sameeya, hubaal waad aragtay sida labada codsi ay ficil ahaan u yihiin nuqul kaarboon, labadaba qaabaynta iyo shaqaynta.
Dhowr toddobaad ka hor, beta-kii ugu dambeeyay ee Apple Music ee loogu talagalay Android, waxaan ku aragnay sida codsigu isugu diyaarinayo in lagu daro a hab mugdi ah Codsiga gudihiisa, qaab mugdi ah oo la heli karo marka Google uu soo bandhigo nooca ugu dambeeya ee Android 10 (macmacaan dheeri ah), kaas oo noqon doona Sebtember 3, ugu yaraan dhammaan noocyada casriga ee Pixel. Qeybaha kale ee boosteejooyinka waa inay sugaan.
Cusboonaysiinta ugu dambaysa ee laga helay beta-ka Apple Music ee loogu talagalay Android, waxaan ka helnay Taageerada Chromecast, taas oo u oggolaan doonta dadka isticmaala Google Home ama kuwa kale ee ku hadla ee uu maamulo Kaaliyaha Google iyo telefishannada leh TV-ga Android inay u diraan muusigga ay ugu jecel yihiin qalabkan.
Laakiin tani ma noqon doonto midda cusub ee aan ka heli doonno cusboonaysiinta soo socota ee Apple Music for Android, maadaama ay sidoo kale tahay waxay ku dari doontaa taageero si loo helo in ka badan 100.000 oo idaacadood adduunka oo dhan, maadaama aan horeyba u sameyn karno isticmaaleyaasha iOS.
Haddii aad rabto inaad ka mid noqoto kuwa ugu horreeya ee iskudaya Apple Music betas ee loogu talagalay Android, waxaad ku sameyn kartaa sidaas adoo saxiixaya iyada oo loo marayo xiriiriyahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Apple Music for Android waxay ku dari doontaa taageerada Chromecast
Waa rasmi: bisha Sebtember 10 waxaan arki doonaa iPhone-ka cusub
Microsoft waxay isku diyaarineysaa qaabka mugdiga ah ee barnaamijyadooda ee iOS